काठमाडौंमा १३ वर्षीया बालिकाको बयान : उस्ले मलाई फोटो पठाउन भनेपछि…. - समृद्ध नेपाल
सामाजिक सञ्जालवाट किशोरीहरु समस्यामा परेका थुप्रै उजुरी प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय यस्ता घ’टना बढेपछि प्रहरीले अभिभावकलाई बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको मोनिटर गर्न आग्रह गरेका हो । आफ्ना बालबालिका कोठाभित्र छन् भनेर ढुक्क हुन नसकिने भन्दै अ प रा धको ट्रेण्ड र तरिकामा धेरै परिवर्तन आइसकेको कुरामा अभिभावक सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले पुस ३० गते २१ वर्षीय सुजन श्रेष्ठलाई ललितपुरको पाटनबाट प’क्राउ गर्‍यो । ति युवकले एक १३ वर्षकी किशोरी माथि गरेको ब्यवहारले सबै अभिभावकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । फेसवुक भर्खर चलाउन जान्ने भएकी काठमाडौ बुढानिलकण्ठ बस्ने १३ वर्षकी किशोरीलाई ति युवकले फेसवुक मार्फत हिं सा गरेको फेला परेको छ ।
नेपालका एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरी यो भनाइ एकपल्ट अवश्य पढेर सेयर गरौ !
शेरधनसँग बिवाह गर्ने लागेकी ज्याङ्मुको सगरमाथा चढ्ने सपना !
इनारमा खसेका पाँच दिनपछि सानुमानको जीवितै सानुमानको उद्धार !
आगलागीबाट उदयपुरमा १५ लाखको क्षति !
विवेकशील साझाका नेता थापाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर,सहयोगको लागि अपिल !
दाईको न्यायको लागि लडे`की सदिक्षा बास्तोला फर्किइन् अमेरिका !
महरालाई ‘फसाइयो’ भन्दै गर्दा रोसनी बनिन भावुक !
गुल्मीमा भीरबाट खसेर एक दम्पतीको मृ`त्यु भएको छ।
खुसीको खबर सम्बन्ध विच्छेद गरेका र अविवाहित महिलालाई ४० कटेपछि मासिक भत्ता पाउने !